ज्याेतिषका अनुसार याे महिनाभरी तपाईकाे भाग्यरेखा यस्ताे रहनेछ,कुन दिन शुभ, कुन दिन अशुभ ? - Eall Nepal
ज्याेतिषका अनुसार याे महिनाभरी तपाईकाे भाग्यरेखा यस्ताे रहनेछ,कुन दिन शुभ, कुन दिन अशुभ ?
माघ महिनाको सङ्क्रान्ति सोमबार परेको छ तर सूर्यको राशि सङ्क्रमणको समयमा रविवारकै संयोग परेको छ । त्यस्तै उक्त समयमा कर्कट लग्न र कृष्णपक्षको त्रयोदशी तिथि रहेको छ । समग्र ग्रह परिवेश यस्तो रहने छ – सूर्यले माघ महिनाभरि मकर राशिमा विचरण गर्ने गर्दछन् । यस महिनाको प्रारम्भमा तुला राशिमा रहेको मङ्गल ग्रहले ०५ गते बृश्चिक राशिमा प्रवेश गरी आफ्नै घरमा पुग्ने सङ्केत छ । सुरुमा धनु राशिमा रहेको बुध ग्रहले १२ गते मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ । सुरुमा मकर राशिमा उपस्थित शुक्र ग्रहले पनि २२ गते राशि परिवर्तन गरी कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्नेछन्, त्यस्तै गतिमा अतिचार भई बृहस्पति ग्रहले समेत यस महिनाको २७ गते बृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्नेछ । धनु राशिमा रहेको शनि, कर्कट राशिमा रहेको राहु र मकर राशिमा रहेको केतु ग्रहको भने महिनाभरि स्थिति यथावत् रहने देखिन्छ ।
यस्तो ग्रह परिवेशलाई विश्लेषण गर्दा यो महिना आम जनजीवनको दिनचर्या त्यत्ति सकारात्म बन्ने सङ्केत देखिंदैन । सूर्यको प्रभावले लडाइँ, झगडा र विवाद बढ्ने महिना छ । रोगव्याधिको प्रकोप र महामारीको सम्भावना पनि देखिन्छ । आमजनताहरू खुसी र प्रसन्न रहन सक्दैनन् । उपभोग्य वस्तुको मूल्यबृद्धि र अभावका कारण जनमानसमा चिन्ता र निराशा बढ्ने छ । हिमपात र शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर रहने छ । रासायनि पदार्थ, जडीबुटी, औषधि, वनपैदावर, कृषिक्षेत्रका चिजबीज आदिको मूल्यमा बृद्धि हुनेछ । शेयर बजारमा मन्दी छाउने सङ्केत छ भने राजनैतिक वृत्तमा महिनाको अन्तिम सातामा कुनै आश्चर्यजनक घटना घट्ने सम्भावना देखिन्छ ।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – दशम भावमा रहेको सूर्यको प्रभावले अत्यन्त क्रियाशील र व्यस्त रहने र कर्मक्षेत्रको परीक्षणको समय हो, माघ महिना । व्यापार र नोकरीका माध्यमबाट लाभ मिल्नेछ । हाकिम, मातापिता र वरिष्ठ व्यक्तित्वको सहानुभूति र आशीर्वाद मिल्नेछ । व्यवसायिक÷व्यापारिक दृष्टिले फलदायी यात्राको सम्भावना छ । महिनाको प्रारम्भमा राशिस्वामी मङ्गलको सातौं घरमा उपस्थिति भए पनि ०५ गतेपछि पूरा महिना आठौं भावमा रहने भएकाले शुभ प्रभाव छैन ।े समस्या र कठिनाइमा समय यापन गर्नु पर्ने छ । दैनिक कामकाज र व्यवहारमा अनेकानेक कठिनाइको सामना गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यप्रति समेत सचेत हुनु राम्रो हुन्छ । जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रको प्रतिकूल स्वास्थ्यका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने छ । भाग्येश बृहस्पतिको शुभ प्रभाव छ, व्यापार वा नोकरी आदिमा उत्तरोत्तर प्रगति हुने राम्रो सम्भावना छ । बहुप्रतीक्षित भ्रमणको सम्भावना छ । मन निडर रहने छ र शत्रुगणले सामु पर्ने हिम्मत गर्दैनन् । विद्वानसित सम्पर्क बढ्ने छ । सामाजिक सम्मान प्राप्त हुनेछ । चौथो राहुका कारण मानसिक तनाव बढ्न सक्छ । विशेष गरी यस महिनाको ०८, ०९, १६, १७, १८, २५, २६ र २७ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – भाग्य भावमा पुगेको सूर्यको मिश्रित परिणाम प्राप्त हुने योग छ । पेसा र व्यवसायमा देखिएका अड्चन र बाधा हटाउन तथा शत्रुदमन गर्न प्रयास गरिने छन् । लामो यात्रा सफल हुनेछैन । मातापिता र अभिभावकवर्गको स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताको विषय बन्नसक्छ । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुनेछ । विश्वासको वातावरण बन्नाले व्यावसायिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा सफलता आर्जन हुनेछ । भाग्यभावमा रहेको राशिस्वामी शुक्रको प्रभावले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट सम्मान प्राप्त हुनेछ र तिनको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ । पारिवारिक जीवनका लागि अनुकूल हुनेछ । पदोन्नति हुने सम्भावना छ भने चाहेको परिणाम हात पार्न सक्नु हुनेछ । मस्तिष्क धार्मिक क्रियाकलाप र जीवनसम्बद्ध उच्च दर्शनतर्फ आकृष्ट हुनेछ । आठौं घरमा रहेको भाग्यपति शनिका कारण महत्त्वपूर्ण चिजबिज हराउने वा नाश हुने खतरा छ । लेनदेनको कारोबारमा हानि पुग्ने सङ्केत पनि छ । स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनु राम्रो हुन्छ, खासगरी वाहनादिमा यात्रा गर्दा सावधान हुनु बेस हुनेछ । विशेषतः यस महिनाको ०१, ०२, १०, ११, १२, १८, १९, २०, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – अचानक विविध समस्या देखा पर्न सक्छन् । पारिवारिक र नातागोताभित्रका सदस्यहरूसँग राम्रो व्यवहार पुर्याउन नसक्नाले विनाकारण झगडा र विवाद हुनेछ । लामो समयसम्म अस्वस्थ हुने आशङ्का छ त्यसैले खानपान, आहारविहार र स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनु बेस हुनेछ । शङ्कास्पद कारोबार र क्रियाकलाप सहभागी नबन्नु राम्रो हुनेछ, त्यस्तै खराब र अनैतिक मानिने कामभन्दा टाढा रहनु नै कल्याणकारी हुनेछ । महत्त्वपूर्ण कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुअघि राम्ररी पढ्नु बेस होला । राशिस्वामी बुध पनि १२ गतेपछि अष्टम भावमा नै प्रवेश गर्नेछ, अतः यतिबेला बुद्धि र विवेकले काम नगर्न सक्छ, त्यसैले यस समयमा सावधान हुनु आवश्यक छ । व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । घरपरिवारकै सदस्यका कारण तनाव सिर्जना हुनेछ । जुवातास, लटरी र सट्टापट्टातर्फ नहौसिनु ठिक हुनेछ । कुनै त्यस्तो आकस्मिक निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ , जसका कारण मानसिक नियन्त्रण गुम्ने सम्भावना हुनेछ । मित्र र सहयोगीहरूबाट निराशा हुनेछ । यात्राबाट थकित बन्नुहुनेछ । नवमेश शनिको प्रभावले अरुले गरेको अनुत्तरदायी क्रियाकलाप र असफलताका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने छ । सामान्यतया यस महिनाको ०३, ०४, ०५, १२, १३, १४, २१ र २२ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) – यो महिना मानसिक रूपले तनावग्रस्त र अस्वस्थ रहने समय हो । कडा मिहिनेत गर्दा पनि राम्रो परिणाम हात पार्न सकिने छैन । व्यवसायिक÷व्यापारिक क्षेत्रमा रहेका नजिकका साथीभाइ र कामदारले धोका दिनसक्छन् । घरपरिवारभित्रका वादविवाद, झैझगडा र समस्याहरूमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुनेछ । पञ्चमेश मङ्गल चौथो घरमा रहेको हुँदा घरायसी सुखसुविधा, अचल सम्पति, वाहनसुख, स्त्रीसुख एवं मित्रहरूको साथ पाउन गाह्रो देखिन्छ । आर्थिक रूपले समेत राम्रो समय मानिंदैन । खर्चको मात्रा बढ्ने छ । तर भाग्येश बृहस्पतिको शुभ प्रभाव देखिन्छ । त्यसैले घरायसी सुखसुविधा बढाउन र चलअचल सम्पत्ति आदिमा खर्च बढ्ने छ, साथै बन्दव्यापारको विकासमा पनि धनव्यय हुनेछ । उता राशिमा नै उपस्थित राहुका कारण चाहिंदा नचाहिंदा काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनेछ । भ्रमका पछि कुद्नु राम्रो होइन । अनावश्यक डरले सताउन सक्छ । आफन्तले बारम्बार धोका दिन सक्छन् । हडबडी र शीघ्रताका साथमा गरिएको काममा कुनै लाभ मिल्नेछैन । विशेष गरी तपाईंले यस महिनाको ०५, ०६, ०७, १४, १५, १६, २३, २४ र २५ अलि बढी सतर्कताका साथ काम गरेको जाति हुन्छ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) – यो समय उपयोगी छ, जे गरे पनि सफलता हात पर्ने सम्भावना हुन्छ । पहिले देखिएका प्रायशः समस्याहरूको निराकरण हुनसक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । पछाडि उछित्तो काड्ने र कुरा काट्नेहरू आफैं चुप लाग्नेछन् । नोकरी र व्यायसायिक जीवनमा सुधार आउने छ । प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ । आफ्नो सर्कलमा सम्मान र साख मिल्नेछ । भाग्येश मङ्गल तेस्रो घरमा रहेको हुँदा मनमा उत्साह र साहसी प्रवृत्ति देखा पर्नेछ । नातागोता, खासगरी दाजुभाइका कारण खुसीको वातावरण सिर्जना हुनेछ । जग्गाजमिनसँग सम्बद्ध कारोबारबाट लाभ प्राप्त हुने सम्भावना छ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीले सामना गर्न सक्दैनन् । गरिएका प्रयासमा सुनिश्चित सफलता प्राप्तिको योग छ । यद्यपि पाँचौं शनिको प्रभावले यस समयमा सृजनात्मक क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्न सक्नुहुन्न र बुद्धिविवेकको ह्रास हुनेछ । सन्ततिको स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताको विषय बन्नेछ । जोखिम ब्यहोर्नु पर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपेण अङ्कुश लगाउनु बेस हुनेछ । बाह्रौं राहु पनि प्रतिकूल रहने छ । शत्रुले हानि पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछन् । विशेष गरी यस महिनाको ०८, ०९, १६, १७, १८, २५, २६ र २७ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) – मनमा ठूलो उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुनेछ । यद्यपि प्रेमप्रसङ्ग, प्रणय एवं रतिरागका क्षेत्रमा निर्लिप्त हुन यो समय उपयोगी हुँदैन । पढाइलेखाइ र बौद्धिक क्रियाकलापका लागि उचित समय छ, तर चिन्तनमननमा बढी निर्लिप्त हुनु पनि हानिकारक बन्नसक्छ । आकस्मिक यात्राको अवसर आउन सक्छ । राशिस्वामी बुधको शुभ प्रभाव रहेकाले लुकेको प्रतिभा र व्यवसायिक योग्यताको सहज विकास हुनेछ । कार्यशैलीमा गम्भीरता आउने छ । सुखसुविधा भोग गर्न पाइने छ र मन प्रसन्न रहने छ । कामप्रतिको लगनशीलताका कारण प्रशस्त लाभ मिल्नेछ । विलासिताका सामग्रीमा खर्च बढ्ने छ । सञ्चारमाध्यमबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ । घरपरिवारमा कुनै शुभ संस्कार सम्पन्न हुने सङ्केत पनि छ । दोस्रो मङ्गलका कारण बोलीमा कठोरता देखिने सम्भावना छ भने चिसोजन्य रोगव्याधिबाट सतर्क रहनु पर्छ । नाक, कान, घाँटी र आँखा सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । भाग्येश शुक्रले गर्दा कला, साहित्य, सङ्गीत आदि क्षेत्रमा प्रशंसा प्राप्त हुनसक्छ । पुराना साथीभाइ र सहयोगीहरूसँग भेटघाट हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०१, ०२, १०, ११, १२, १८, १९, २०, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) – यो महिना कडा मिहिनेत र परिश्रम गर्ने योग छ । निरन्तर गरिएको कष्टप्रद परिश्रमका कारण छिटै थाकिन्छ र कार्य क्षमतामा समेत कमी आउने छ । मन कुकर्म र गलत आचरणतर्फ आकर्षित बन्न सक्छ । मातापिता र अभिभावक वर्गको स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताको विषय बन्नेछ । दुर्घटनाको सामान्य सम्भावना छ, त्यसैले सवारीसाधन हाँक्दा र बाटो काट्दा सावधान र सचेत रहनु बेस हुनेछ । तृतीय भावमा रहेको भाग्येश बुधको प्रभावले मिहिनेतको राम्रो नतिजा हात पर्ने छ । विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ । पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ । अभिव्यक्तिगत कलात्मकता एवं भावनात्मक अभिनयको सहज प्रतिभा देखा पर्नेछ । राशिस्वामी शुक्रको प्रभावले पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ । व्यापार वाणिज्यबाट लाभ मिल्नेछ । परिवारमा एक किसिमको जमघट र रमाइलोको वातावरण सिर्जना हुनेछ । परिवारमा सदस्य सङ्ख्यामा बृद्धि हुने वा अतिथिको आगमन हुने सम्भावना छ । गरेको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ । आमा वा कुनै बृद्ध स्त्रीबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ । यस महिनाको ०३, ०४, ०५, १२, १३, १४, २१ र २२ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) – पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ । बहुप्रतीक्षित इच्छा, आकाङ्क्षा र उद्देश्य सफल हुनसक्छन् । अधिकतम समय घुमघाम र भ्रमणमा बित्नेछ, साथै ससाना यात्रा फलदायी र भाग्यशाली सिद्ध हुनेछन् । आकस्मिक रूपमा धनप्राप्तिको सम्भावना समेत छ । घरपरिवारका सदस्य, मित्र र नातागोता माझको सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । ०५ गतेपछि राशिस्वामी मङ्गलले तपाईंकै राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले आर्थिक रूपले यो उत्तम समय छ । व्यावसायिक कारोबारबाट लाभ मिल्नेछ । सामाजिक प्रसिद्धि प्राप्त हुनेछ । परिवारका सदस्यहरू सकारात्मक हुनेछन् । लगानीमा रहेको रकम फिर्ता आउनसक्छ । यस अवधिमा भ्रमणबाट समेत लाभ हुनेछ । दार्शनिकता प्रति झुकाव बढ्ने छ र स्वभावमा गम्भीरता प्राप्त हुनेछ । तर पञ्चमेश बृहस्पति बाह्रौं भावमा रहेकाले खर्च धेरै हुनेछ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीले तनावको सिर्जना गर्नेछन् । जतिसक्दो यात्राबाट जोगिनु बेस हुनेछ । विपरीत परिस्थितिलार्ई सामना गर्न आँफूभित्र प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई विकसित तुल्याउनु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै तेस्रो भावको केतुका कारण बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न । सामान्यतया यस महिनाको ०५, ०६, ०७, १४, १५, १६, २३, २४ र २५ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) – राज्यस्थानमा रहेको राशिस्वामी बृहस्पति ग्रहको प्रभावले उत्साहपूर्ण समय छ । प्रतिस्पर्धा वा परीक्षामा सहभागी हुँदा सफलता आर्जन हुनेछ । तर पनि धनभावमा प्रवेश गरेको सूर्यको शुभ प्रभाव देखिंदैन । शारीरिक तनाव र बोझलाई झेल्नसक्ने सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक झैझमेला र समस्या बढ्नाले मन विचलित हुनसक्छ र पारिवारिक जीवनमा निराशापना देखिने सम्भावना छ, तर घरायसी समस्या र परिवारजनका भावनालाई समेटेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ । दीर्घकालिक लगानी र कारोबारप्रति सचेतता अपनाउनु पर्छ । स्वास्थ्यतर्फ आँखा र मुखको क्षेत्र कमजोर छन् । बोलीमा पनि अङ्कुश लगाएकै बेस हुनेछ । ०५ गतेपछि बाह्रौं भावमा पुग्ने पञ्चमेश मङ्गलको प्रभावले काममा बाधा आउने र ढिलो हुने सम्भावना छ । कहिलेकाँही असुरक्षाको हीनभावना विकसित हुन सक्छ । कामको बोझ बढ्ने छ । व्यर्थको काममा फँस्ने सम्भावना समेत छ । स्वास्थ्य पनि ठीक हुनेछैन । पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछैन । नातागोताको प्रतिकूल स्वास्थ्यका कारण चिन्तित हुनुपर्ने छ । साझेदार वा सहयोगीको लापरवाहीका कारण हानि पुग्नसक्छ । खासगरी यस महिनाको ०८, ०९, १६, १७, १८, २५, २६ र २७ गते तपाईंले सतर्क रहनु उचित हुनेछ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) – आफ्नै राशिमा ग्रहाधिपति सूर्यको प्रवेश भएको छ । माघ महिनामा तपाईं धनसम्पत्ति र सुखसुविधा आर्जन गर्ने पक्षमा आकर्षित रहनुहुनेछ । आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुनेछ । सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेबारी प्राप्त हुनसक्छ । सामाजिक सङ्घसंस्था वा परोपकारका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । तर राशिस्वामी शनिश्चर बाह्रौं भावमा रहेकाले जीवनीशक्तिमा कमी भएको अनुभूतिका कारण आँफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । व्यर्थको काममा आफ्नो ऊर्जा नाश हुनेछ । नवमेश शुक्रको उपस्थिति आफ्नै राशिमा रहेकाले केही हदमा सकारात्मक फल प्राप्त हुनेछन् । दाम्पत्यसुख बढ्ने छ, साथीभाइ र मित्रवर्गले साथ दिनेछन् । ललितकला, सङ्गीत एवं साहित्यमा रूचि जाग्ने छ । सानातिना रोगले अस्वस्थ तुल्याउन सक्छ, तर घरपरिवारका सदस्यले काममा सक्दो सहयोग पुर्याउने छन् । उता लग्नमा रहेको केतुको प्रभाव राम्रो देखिंदैन, मुद्दामामिला र कानूनीफन्दामा फँस्ने सम्भावना छ । महत्त्वाकाङ्क्षा र असम्भव आशामा अल्झिएर बस्नु राम्रो होइन । खानपान र आहारविहारको कमीले पाचनप्रणालीमा गडबडी आउन सक्छ । यस महिनाको ०१, ०२, १०, ११, १२, १८, १९, २०, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) – हुन त राज्यस्थानमा रहेको राशिस्वामी शनिश्चरको प्रभावले समस्त इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुने समय छ, यद्यपि बाह्रौं भावमा सूर्यको प्रभाव रहने भएकाले माघ महिनामा तपाईंले क्षणिक आवेग र उन्मादलाई नियन्त्रण गर्नु बेस हुनेछ । गलत निर्णयका कारण अकल्पनीय हानि हुनसक्छ, त्यसैले कुनै निर्णय लिनुपूर्व राम्रो सोचविचार गर्नु आवश्यक छ । असुरक्षाको भावना विद्यमान रहने छ । मानसिक चिन्ताका कारण कष्ट हुनेछ । शरीरमा रोगले सताउन सक्छ । मस्तिष्कलाई आराम हुनेछैन । घरपरिवारका सदस्यले फरक व्यवहार देखाउन सक्छन् । खर्चको मात्रा बढ्ने छ । व्यवसायिक स्थितिमा गिरावट आउनसक्छ । व्यक्तिगत स्वास्थ्य पनि अनुकूल हुनेछैन । जुवातास, लटरी र सट्टापट्टातर्फ नहौसिनु ठिक हुनेछ । त्यस्तै नवमेश बुधले पनि ०५ गतेपछि बाह्रौं भावमा नै प्रवेश गर्ने भएकाले समेत अहिलेको समय राम्रो छैन । स्वास्थ्यको प्रतिकूलताका कारण कठिनाइ हुनसक्छ । आफ्ना परिजन र घरपरिवारकै सदस्यका कारण समेत तनावको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । परिचित व्यक्तिका बारेमा दुःखद समाचार सुन्नु पर्नेछ । सनक र उन्मादबाट प्रेरित भएर गरेको कामकाजबाट हानि पुग्नेछ र गहिरो सङ्कटमा फँस्न सक्नुहुन्छ । सामान्यतया यस महिनाको ०३, ०४, ०५, १२, १३, १४, २१, र २२ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) – इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने समयका रूपमा माघ महिनाको आगमन भएको छ । नातागोताका सदस्यहरूबाट सहायता मिल्नेछ । यस समयमा गरिएका किनमेल र कारोबारहरू सफल हुनेछन् । करार र सम्झौताबाट लाभ मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवन, घरायसी सुख, प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि पनि श्रेष्ठ समय हो । तर राशिस्वामी बृहस्पति अष्टम भावमा रहनु र दसौं भावमा रहेको शनिश्चरको प्रभाव सुखद हुने देखिंदैन । मनले इच्छाएको परिणाम प्राप्त गर्न कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ । काम ढिलो सम्पन्न हुनेछ । पेसा वा व्यवसायसँग सम्बद्ध परिवर्तन गर्न खोज्नु हानिकारक हुन्छ । प्रत्येक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा धैर्य गर्नु अनिवार्य छ । जग्गाजमिनको किनबेच गर्ने प्रक्रियालाई स्थगित राख्नु बेस हुनेछ । बुध र शुक्र ग्रहको प्रभाव अनुकूल नै देखिन्छ, तर पाँचौं भावको राहुका कारण समुचित निर्णय लिन नसक्दा क्षमता र योग्यतामा नराम्रो प्रभाव पर्नसक्छ । अन्धविश्वास र भ्रमले डेरा जमाउने बेला हो, यो । महत्त्वाकाङ्क्षा र असम्भव आशा जाग्नाले निराश हुन सक्नुहुन्छ । यस महिनाको ०५, ०६, ०७, १४, १५, १६, २३, २४ र २५, गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
प्रदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउदै हो भने हेर्नुहोस आजको बिनिमयदर- आजमिति २०७४ माघ ०१ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०१८ जनवरी १५ तारिख । नेपाल सम्बत् ११३८
उत्तर कोरियाका जनताका लागि दुखद खबर- सबैले पेटभरी खान नपाउने गरी खाध्य संकट, तर पनि बिश्वलाई धावा बोल्दै …